၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်မိတ်ကပ်ပုံစံ ၄ မျိုး Bezzia
တောရက်စ် | 09/09/2021 20:00 | လှပမှု
ဆောင်း ဦး ရာသီသည်တံခါးခေါက်လျက်ဤနှစ်တွင်အရောင်ပိုလာစေမည့်မိတ်ကပ်ခေတ်စားလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီတွင်နာမည်အကြီးဆုံးဖက်ရှင်ကျွတ်လမ်းလျှောက်ပွဲများကလာမည့်အရာအားသတိပေးခဲ့ကြပြီးသူတို့စိတ်မပျက်ခဲ့ပေ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုအကျော်ကြားဆုံးမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ် အင်အားနှင့်အလှဆင်ထားသောမိတ်ကပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်အောင်ပွဲခံမည့်အရာဖြစ်သည်.
အစွမ်းထက်သောမျက်လုံးမိတ်ကပ်သည်တစ်ဖန်ပြန်လည်တောက်ပပြီးအနက်ရောင်နှင့်နှလုံးရပ်တန့်သောမျက်တောင်များနှင့်စုစည်းထားသောအသားအရေဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်သားထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီများ၏ကြားနေသံများကအစွမ်းထက်ဆုံးမိတ်ကပ်ကိုဖြစ်စေသည် နှင့်ဖော်ပြချက် ရည်ရွယ်ချက်အားလုံး၏ကြေငြာချက်သည်တစ်ဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်သောအခါဇာတ်လိုက်ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်မိတ်ကပ်ပုံစံများကိုသတိပြုပါ၊ ၎င်းကိုသင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မည်သို့ ၀ တ်ရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
1 မိတ်ကပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ အဲဒါတွေကိုဘယ်လိုဝတ်မလဲ
1.3 ရောင်စုံ eyeliner
1.4 ဦး ဆောင်နှုတ်ခမ်း
လှပတဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ငါတို့ကအိပ်မက်မက်ဖို့ catwalks တွေရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်နေ့စဉ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိရန်လွယ်ကူသောမိတ်ကပ်သို့မဟုတ်ဖက်ရှင်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဖက်ရှင်နှင့်မိတ်ကပ်ပညာ၏မှော်ပညာသည်လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုကိုအသုံးချနိုင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံး catwalks များ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအသုံးချခြင်း။ မင်းအတွက်လုပ်ပါ မိတ်ကပ်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်အသုံးချပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုမျက်ခြည်မပျက်လိုက်ပါနဲ့။
ဖက်ရှင်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများသည်ယာယီသာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ၊ သင်၏အရသာနှင့်သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်သောအရာများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါ။ သူတို့ကိုထူးခြားစေရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါစေ။ ဒီရာသီနဲ့ဒီရာသီအတွက်မိတ်ကပ်လမ်းကြောင်းတွေကိုသတိပြုပါ ၎င်းတို့အားနေ့စဉ်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသောအချက်များ.
မကြာသေးမီရာသီများတွင်မျက်နှာဖုံးအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာမျက်နှာ၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးများသည်မိတ်ကပ်၏အဓိကဇာတ်လိုက်များဖြစ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမီးခိုးငွေ့မျက်လုံးများသည် ပို၍ အစွမ်းထက်။ ကောင်းစွာမှတ်သားပြီးသတ်မှတ်သည်။ နွေ ဦး လမ်းလျှောက်ပွဲများတွင်သူတို့ကအလွန်သန့်ရှင်းသောမီးခိုးငွေ့ကိုကြေညက်စွာကြေငြာခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကနေ့ဘက်မှာဒီလောက်အစွမ်းထက်တဲ့ eye makeup ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် အခြားအရောင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်မရ။ ပြီးတော့ငါတို့ကဒီရာသီဆောင်း ဦး ရာသီရဲ့အောက်ပါအချက်တွေကိုတွေ့ဆုံဖို့သွားမယ့်နေရာ၊ ဒီရာသီမှာမင်းရဲ့မိတ်ကပ်ကိုအရမ်းကြည့်ကောင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်။
Pastel အရောင်များသည်နွေရာသီအတွက်သာမဟုတ်၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးသော mauve, blues နှင့် pastels သူတို့ကဒီရာသီကိုလာပြီး အနည်းငယ်လှည့ ်၍ ရသော်လည်း၎င်းတို့ကို graphic eyeliners သို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်သော smokey eyes များတွင်သုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံး pastel အရိပ်ဖြင့်မျက်လုံးမိတ်ကပ်ကိုဖန်တီးပါ၊ ထုတ်ကုန်ကိုမလစ်ပါနှင့်သင်လိုချင်သောအရိပ်ရသည်အထိဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပါ။
မျက်လုံး၏မျဉ်းကြောင်းကိုအမှတ်အသားပြုလုပ်ရန်အခြေခံအားဖြင့်ရှေးအကျဆုံးခေတ်စားလာသောမျက်တောင်တစ်ချောင်းကိုပြုလုပ်ရန်အခြေခံအားဖြင့်စတိုင်မကျပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီရာသီမှာရယ်စရာအကောင်းဆုံး eyeliners တွေကိုသိမ်းထားတယ်ဆောင်း ဦး ကိုအရောင်တင်နိုင်သောအစွမ်းထက်တက်ကြွသောအရောင်များနှင့်အတူ။
နှုတ်ခမ်းများသည်အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတို့အားနောက်ခံသို့တန်းဆင်းသွားစေသော်လည်းနှုတ်ခမ်းများသည်အဆုံးမသတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းပါးစပ်ကမင်းအကြောင်းအများကြီးပြောပြီးနှုတ်ခမ်းနီကိုအနည်းငယ်ထိလိုက်ရုံနဲ့မင်းကအထင်ကြီးဆုံးအကြည့်ကိုရနိုင်တယ်။ ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် သူတို့သည်မျက်နှာ၏တစ်ခုတည်းသောဇာတ်ကောင်အဖြစ်အစွမ်းထက်နှုတ်ခမ်းများကို ၀ တ်ဆင်ကြသည်.
အလွန်အရည်ရွှမ်းသောအသားအရေနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းအနည်းဆုံးထုတ်ကုန်ပမာဏ ပေါ့ပါးသော mascara နှင့်ပါးပြင်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်နီမြန်းပြီးသင်၏အလွန်အစွမ်းထက်သောနှုတ်ခမ်းနီ နေ့တစ်နေ့ကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက်အရည်ရွှမ်းတောက်ပပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြဖို့သင်ပိုမလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိတ်ကပ်သည်ကစားခြင်း၊ ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်မိတ်ကပ်ပုံစံအသစ်များကိုခံစားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ၂၀၂၁ ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်မိတ်ကပ်ပုံစံ ၄ မျိုး